WAA MAXAY SABABTA LAFTIISA AYSAN UBAXIN, LA DAGAALLANKA CUDURADA IYO CAYAYAANKA UBAX - XAKAMAYNTA CAYAYAANKA
Waa maxay sababta caleemaha u noqdaan huruud, sida loo ilaaliyo ubaxa cudurka iyo cayayaanka
Bannaanka u badan dhirta ubaxyada dhirta. Jacaylka habka sahlan ee lagu demiyo iyo daryeelka fudud. Laakiin ha ilaawin sifooyinka waxyeellada ee midabada. Haddii aad fiiriso shuruudaha beerashada iyo daryeelka, ubadka lama kabayo cudurada ama cayayaanka.
Noocyada ubaxyada ubaxyada
Lily waa warshad dilka ah, laakiin si ay u baro sanad walba, waxaad u baahan tahay inaad soo celiso seddexdii sanoba mar.
Ma taqaanaa? Qaar ka mid ah Beelaha galka ayaa la soo celiyaa 10kii sano ee kasta. Noocyada Aasiya, ee liddi ku ah, waxay u baahan yihiin inay dib u soo celiyaan sanad walba.
Ubax ku-beddelashada xilliga dayrta ama gu'ga. Laakiin noocyo of ubaxyo ubax waqti ka duwan yahay, sidaas darteed waa inaad diiradda saaro iyaga. Xilliga dayrta, nalalka ubaxa ayaa nasanaya, sidaas darteedna waxay ku habboontahay inay dib u soo celiso. Haddii ubaxu hore u yaryahay, markaa waxa fiican in la sameeyo xilliga dayrta. Dhulku wuxuu weli noqon doonaa mid diirran, oo waxay u sahlanaanaysaa in ay la qabsadaan. Transplanting xilliga dayrta waa ka sahlan tahay guga.
Marna ha ku celin caleemo quman ka dib Sebtember. Nalalka ma degi karto mana baabi'i karto.
Aad bay muhiim u tahay in beerista la miiro ilaa qabow, ka dibna guluubku si degan ayuu u qaadanayaa xididka, iyo xilliga kuleylka dhirta uu ku farxi doono ubaxiisa. Diyaarinta isu tallowga guga waa sida soo socota:
qodo nalalka dayrta iyo meel bac ah oo leh hawo;
nadiifi nalalka ku xoqaya qoyaanka;
Ku kaydi bac ah basasha qaboojiyaha.
Dabayaaqadii Maarso ama horraantii Abriil, waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la beero nalalka dhulka. Qaabka habka transplanting ayaa kuu habboon adiga, dooranaya naftaada, laakiin bannaanka u badan xusuusnow in miiqyada lagu beddelo gu'ga guga horumarin ka fiican kuwa lagu beddelo xilliga dayrta. Haddii aad dareentid in ubaxu uusan ubaxin, markaa waa waqtigii loo bedelay. Haddii aad sidan sameyso, adoo raacaya xeerarka oo idil, sanadka soo socda ubadkaaga ayaa ku farxi doona ubaxyada.
Daryeelka sax ma yahay?
Daryeelka Lily waa arrin sahlan. Waxaa muhiim ah in la xasuusto biyaha ubaxyada iyo dhulka loo dhigo goobta. U hubso inaad diyaariso ciidda loogu talagalay qashinka. Xilliga dayrta bogga si aad uga sameysid humus caws engegan, oo daboolaya goobta degelka. Guga ka hor inta laga beerto nalalka si Bacriminta macdanta. Si aad u kabto dhulkii ay miiqyada la beeray waa in ay aad u taxaddaraan in aysan waxyeeleynin nalalka.
Haddii aad aragto in dhulka uu noqday mid aad u cufsan, ku rush adigoo cufsan. Tani waxay ka caawinaysaa inuu daboolo. Ha iloowin in la jarjaro miiqyada wakhtigaa oo si sax ah, ka saar ubaxyo yar yar iyo sanduuqyada abuurka. Caleemaha shuban iyo afkoda waa in si taxadar leh loo jaro si looga hortago cayayaanka ama fayrasyada inay soo galaan. Wixii bouquets ee Fiiriya ubaxyada, jarjar si diagonally si ay stem haray daboolayaa caleemaha. Iyada oo bilawga ah cimilada qaboobaha, jarjaran cagaarka si heer sare ah.
Sida loo xaliyo cayayaanka ugu muhiimsan ee miiqyada
Qaar badan oo beeraley ah ayaa la kulma beerista ubaxyada leh dhibaatada sida cayayaanka. Waxyeellada weyn waxaa keena dirxiga guluubyada lakabka, baradhada baradhada, jilicsanka bulaacada, iwm. Si loo xakameeyo cayayaanka iyadoo la adeegsanayo hababka kala duwan, laakiin ugu caansan waa: qulqulaya nalalka ka hor inta aan laga beerin cayayaanka ama kaneecada, ka hortagga inta lagu jiro ubax, ciribtirka wakhtiga cayayaanka, ubaxyada la qalajiyey iyo caleemaha.
Doolada laydhku si cad ayey u muuqaneysaa on ubaxa sababtoo ah midabka cas. Waxay u dhigtaa ukumaha laga bilaabo Abriil ilaa Sebtembar. Duulinta iyo dirxiga waxay ku quudinayaan caleemaha, ubaxyada iyo sanduuqyada abuur ee ubaxyada, taas oo keenaysa dhaawac weyn oo geedka. Pyrethroids synthetic (Fastek, Karate, Decis, Antizhuk) ayaa loo isticmaalaa si loola dagaallamo duulimaadka laydhka. Hawlaha loo baahan yahay in lagu celiyo laba toddobaad.
Aad halis ugu ah barafka baradho. Rinjiga waa midab casaan ah, ugxanteeduna waxay ku jirtaa caws iyo digaag. Waxay u gudbi kartaa ubaxyada qoyan ee kori kara. Roobku wuxuu cunaa caleemaha yaryar ee gudaha ah, ubaxa ayaa jebiya oo baaba'aya. Waad ku dagaalami kartaa adigoo xakameynaya goynta cakiran.
Xiddiga, xajmiga oo ah 1 mm oo keliya, ayaa keena waxyeelo aan loo baahnayn oo nalalka ubaxa ah. Wuxuu cunaa qolfaha guluubka, taasoo keenta in uu qudhmo. Caleemaha ubaxu waxay noqdaan jaalle waxayna u dhintaan, waxay joojisaa koritaanka. Si tartiib ah, cayayaanka ayaa ku faafaya nalalka kale ee carrada, sidaa daraadeed dhammaan dhirta basbaaska waa cudur. Waad la dagaallami kartaa cayayaanka adigoo qodaya iyo burburinta nalalka cudurka qaba. Wixii ka hortag ah, ka hor inta beerto, nalalka waa in lagu qabtaa xal xashiishka potassium ama "Karbofos", rusheeyaa leh faaruq.
Waa muhiim! Haddii goobta beertaada ay ku dhacdo cayayaanka, ha beeran dhir dabaysha muddo 3-4 sano ah ilaa ay ka dhammaato.
Caarada iyo caarada caarada
Aphid waa cayayaan yar, laakiin cayayaan qatar ah. Aphids on miiqyada aad u wiiqa geedka, cuno iyo infakshanka leh caabuqa fayras. Waxaad ka takhalusi kartaa adiga oo ku buufinaya ubaxa leh cayayaanka. Caarada Spider waxay cabtaa casiir laga bilaabo dhirta, kaas oo caleemaha bilaabaan inay huruud isu beddelaan, ku daboolaan spiderweb iyo qalalan. Layla waxay ku dhici kartaa cayayaanka geedo geedo midho leh ama dhir uduban oo u dhow. Wixii ka hortagga iyo xakamaynta cayayaanka, waxaa lagama maarmaan ah in lagu buufiyo ma aha oo kaliya ubaxyada, laakiin sidoo kale tiro ka mid ah ay duurka iyo geedaha sii kordhaya.
The cadowga ugu khatarta ah ee miiqyada waa loola beeri qoyan. Laakiin ugu khatarsan ee dirxiga. Waxay yihiin kuwo aad u jilicsan. Xayawaanka iyo canugga wuxuu cunaa caleemaha ubaxyada waxayna qaadaan fayrasyo ​​kala duwan. Mashiinka Pike wuxuu u adkeysan karaa kiimikooyin kala duwan, sidaa daraadeed waxa ugu fiican in la nadiifiyo gacanta. Ka taxadar: Haddii jirku uu hoos u dhaco, wuxuu isku dayayaa in uu dhinto, dib ugu soo laabto dhabarka, tan iyo markii calooshiisu madow yahay, way adagtahay in la helo dhulka.
Lily waxay leedahay cudur, daaweyntooduna waxay ku xidhan tahay ka hortagga wakhtiga. Beeraley kasta oo kasta waa inuu ogaado waxa ay miiqyada iyo hababka jira ee ka hortagga cuduradani ay xanuunsan yihiin. Ka hor intaan la beero nalalka waa in ay si taxadar leh u baaraan guuldarada. U hubso inaad qaaddo daaweynta bakteeriyada daaweynta shaki yar oo kallana. Ka dhig ciidda ka hor beerashada.
Sida loo daweeyo fusarium
Fusarium wuxuu saameeyaa xididada lafil. Haddii aad ogaato in dusha sare ee caleemaha ay noqdaan huruud, saldhigga asliga ah waa caleen, geedka ayaa bilaabay inuu qalajiyo - tani waa fusarium. Si loola dagaalamo waa in loo isticmaalo lime-fluff ama ash. Ku buufi dhirta Topsin-M ama Fundazole. Haddii dhirtu si buuxda u saameyso, waa in la qodo oo la burburiyaa.
Haddii aad dareentid dhibco kuus on ubaxyada kala duwan, tani waxay u badan tahay kallana bakteeriyada. Haddii aadan cudurkaas wax ka qaban, caleemaha ayaa si tartiib ah u bilaabi doona inay u dhintaan, burooyinkuna way dhacaan, ubaxu way engegi doontaa. Si loola dagaallamo kalluunka, isticmaal fosfate ama Bacriminta potashka, ku dabool qorax qoryo, geedi socodka warshadaha Bordeaux, Fundazole ama Benomil.
Ma taqaanaa? Cudurro badan iyo cayayaanka ayaa laga qaadi karaa dhirta ku dhow ama haramaha. Si looga hortago waxaa haboon in la buufiyo ma aha oo kaliya ubaxyada, laakiin sidoo kale meel bannaanka ku wareegsan.
Rootka Root wuxuu ku dhacaa nalalka salal. Waxay ku daboolan yihiin dhibco madow, geedka wuxuu bilaabaa inuu si tartiib ah u koro, iyo burooyinkuna waxay dhacaan. Tartiib tartiib ah dhogorta xayawaanka ubaxa. Si loola dagaallamo cudurka, si taxadar leh u dooro wax beerashada, jeermi carrada leh baaruudhka calloid iyo daaweyn nalalka kahor inta laga beeri. Dhirta waxyeelada leh waa in la saaraa oo la burburiyaa.
Marka piciciplosis ee ubaxa peduncles kallana, ubax iyo nalalka waxaa lagu daboolay ubaxyada cagaaran. Tani waa cudur aad u halis ah oo caan ah oo ah qoryaha oo dhan. Wixii ka hortagga cudurka, waxaa habboon in lagu buufiyo dhirta iyo pickle nalalka leh fungicides. Dhirta cudurka qaba waa in laga saaraa goobta oo la burburiyo si aysan cudurku u faafin libaaxyada caafimaadka leh.
Way adag tahay in la dagaallamo cudurrada fayraska marka loo eego kuwa fangaska. Way adagtahay in la daweeyo oo la baaro. Cudurada viral waxaa qaadaya cayayaanka iyo qalabka beerta. Kuwa ugu caansan waa:
fayruska isbeddelka - waxaa laga qaadaa tulooyinka. Ciriiri ku yaal midabyo aan caadi ahayn oo ubax ah. Waxay qaadi kartaa aphid;
rosette - koritaanka dib u dhaca ee biqilka ubax, stem deformed, caleemaha qalloocan oo qoorta. Gaariga ugu weyn waa aphid;
Muuqaalka - dhibco iyo xuduudaha caleemaha.
Masaakiinta masaakiifku way ubaxmi karaan oo dhali karaan miraha. Laakiin waxay horayba u qaadi doonaan fayras. Waqti ka dib, ubaxu way dhiman doonaan, abuurka abuurkuna wuxuu mar kale faafin doonaa fayruuska, taas oo loo wareejin karo dhir kale kale by aphids.
Si looga fogaado infekshanka fayruusyada dhirta oo idil, marka hore, waa in ay fiiro gaar ah u yeeshaan qaybahooda iyo qaadashada dagaalka ka soo horjeeda cayayaanka.
Wixii ka hortagga cudurada oo dhan ee Fiiriya ubaxyada, kormeer dhirta beddelka midabka caleemaha, jirridda iyo ubaxa. Haddii aad ogaato in ubaxa ay isbeddeshay muuqaalkeeda (dhibco waxay u muuqdaan ubaxyada, ubaxyada caleemaha ubaxyada, ubucdadu waxay noqdaan kuwo qalloocan, dhirta waxaa lagu daboolaa cagwada, ubaxyadu ma baro, iwm), isla markiiba soo saar geedkaan. U hubso inaad ka tirtirto liistadaada ka dib markaad la shaqeyso dhirta cudurka qaba. Cudurka cayayaanku ku samee.
Waa muhiim! Waqtiga la qaadayo ka hortagga cudurka ayaa kaa caawin doonta inaad ilaaliso ubaxa cudurka. Si taxaddar leh u kormeeri qalabka beeraha si aad wax u yeelato.
Sidaa darteed, si ay ubaxu ku faraxsan aad ubaxyo qurux badan sanad kasta, ma la dhibtoon cudurada iyo cayayaanka, waa inaad ka taxadartaa. Isticmaal Bacriminta tayo sare leh iyo kiimikooyin, ha ilaawin ku saabsan beerista ubaxyada iyo inaad hubiso inaad la socoto xaaladda ubaxa. Haddii aad qaadatid ka hortagga cudurrada iyo daryeelka ubaxyada waqtigooda, waxay kuu mahadcelin doonaan, qurxinta bogga leh ubaxyo caafimaad leh.
Hababka dhaqameed ee bogsashada: daaweynta rhinitis ee toon. Raashinka dhibco sanka, neefta, iwm.
Xayawaanka Colorado waxay u duuleen baradho. Siyaabaha loola macaamilayo baradhada barafka ee Colorado
Dhibaatada xoogga leh ee ugu yar ee daryeelka - noocyo kala duwan oo cambaleed ah
Kala beddelista wisteria adiga ayaa sameeya
Cherry waxa uu noqday mid baahsan, sababtoo ah waxa aan qabyo ahayn iyo tiro badan oo ka mid ah guryaha muhiimka ah. Si habboon loo abaabulo beerashada iyo daryeelka ee warshad qiimo leh waa qof kasta. Gorma ayaa loo yaqaan dadka muddo dheer, iyo sidoo kale hantida faa'iido leh. Ujeedooyinka daaweynta, ma aha oo keliya berriga geed ama geed geedo loo isticmaali karo, laakiin sidoo kale caleemaha, afkoda iyo xitaa xididdada. Read More
Turkeys Fasalka Maktabadda: tarbiyadda guriga
Kala duwanaanshaha caleemaha sare ee "Caduud": sawiro, sharaxaad iyo tilmaamo tallaabo tallaabo ah oo loogu talagalay sii kordhaya
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Xakamaynta Cayayaanka 2020